Safiirka Turkiga Ufadhiya Soomaaliya Oo Kulan Laqaatay Wasiir Beyle. – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka ee xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa Xarunta Safaaradda Turkiga ee Muqdisho kulan kula qaatay Safiirka Dowladda Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaz.
Kulankan dhexmaray labada Mas’uul ayaa waxaa ay uga wada hadleen xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal, iyagoona kulankooda diirada ku saaray dhaqaalaha dalka iyo dib-u-habeynta Maaliyadda.
Qoraal uu soo saaray Wasiir Cabdiraxmaan Beyle ayuu ku sheegay inuu Turkiga sii kordhinayo Taageeradiisa Maaliyadeed iyo Horumarinta xirfadlayaasha dalka Soomaaliya, isagoona uga mahadceliyay arrimahaas.
“Waxa aan ka wadahadlanay dhaqaalaha dalka iyo dib-u-habeynta Maaliyadda, sidoo kale waxa aan uga mahadceliyay doorka wanaagsan ee uu ka cayaarayo horumar Soomaaliya, Turkigu waxa uu sii xoojinayaa xiriirka Saaxiibnimada Soomaaliya, Taageeradiisa Maaliyadeed iyo Horumarinta xirfadlayaasha dalkeena” ayuu yiri Wasiir Beyle.
Dowladdaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aad u wanaagsan oo ku saleysan dhinacyo kala duwan, isla markaana waxaa Turkiga dowladda Federaalka uu ka taageeraa tababarada Ciidamada.